Vinaingitra, vinaingitra ary verinia nify | Nutri Diet
Aron | | soso-kevitra, fahasalamana
El ny vinaingitra paoma dia fanafody voajanahary an'arivony taona, izay miaraka amin'ny fahasalaman'ny olombelona amin'ny ambaratonga maro, toa ny mifehy ny haavon'ny siramamy ao anaty, rehefa nalaina alohan'ny sakafo starchy, fa mety misy fiantraikany ankolaka amin'ny nify.
ny Ny asidra vinaingitra toy izany dia manana ny fahaizany mitafy «enamel» nify, fa ny fitandremana kosa dia afaka misoroka an'io fanelingelenana io, ka misy fomba ahazoana ireo rehetra tombontsoa azo avy amin'ny fihinanana vinaingitra ho famenon-tsakafo sy fanafody nefa tsy manelingelina anay.
Ny enamel nify dia vita amin'ny sosona sy ny ao anatiny o dentine Izy io no malefaka indrindra, satria ny enamel mafy ilay manarona ny vodin'ny nify ary ilay manome famirapiratana ho azy ireo. Enamel no tena ahitana ny a fosidratan'ny kalsioma, mineraly mitovy amin'ny an'ny calcium carbonate izay misy voahangy voajanahary.
Ny enamel nify koa dia misy a proteinina antsoina hoe amelogenin, izay mety levona amin'ny vinaingitra misy divay, noho izany ny fihinanana vinaingitra tsy tapaka dia mety manomboka manala enamel mafy.
Ny vinaingitra episy dia mazàna vita amin'ny paoma organika, izay avy amin'ny ranom-boaloboka no ahazoana ny vokatra voajanahary, manankarena amin'ny otrikaina toa kalsioma, potasioma, vitamina A, asidra malika ary asidra acetic, saingy ireo singa roa farany ireo no tompon'andraikitra amin'ny fahasimban'ny enamel nify, rehefa navoaka imbetsaka rehefa mandeha ny fotoana.
Tolo-kevitra momba ny fihinanana vinaingitra azo antoka
-Atao ny vinaingitra vita amin'ny paoma amin'ny fifangaroana 1 ka hatramin'ny 10, misy jus, rano na dite. Ity dia hitazona ny Asidra malic sy acetic amin'ny bay, misoroka ny fandoroana ny vavanao sy ny tendanao, fiarovana enamel nify.
-Mangaro ny vinaingitra paoma misy menaka oliva hatao akanjo salady. Ny menaka oliva dia sady afaka manalefaka vinaingitra no manome sosona miaro ny enamel nify.
-Sasao foana ny vavanao ary sasao ny nifinao aorian'ny fihinanana azy Vinaingitra episy.
-Mba maka azy amin'ny fanafody voajanahary, tsy maintsy afangaro anaty rano miel ary ento amin'ny mololo, izay hisorohana ny fifandraisana mivantana amin'ny nify.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Vinaingitra episy, fahasalamana ary enamel nify
fa hoy kosa izy ireo fa ny fihinana ny vinaingitra paoma dia mila miandry 30 minitra hamafana ny nifintsika, ary ao amin'ilay lahatsoratra dia milaza fa aorian'ny fihinanana ny vinaingitra dia tsy maintsy kosehina ary avy eo borosy nify.
Valiny amin'i MONICA
Herisara teas ho an'ny fitsaboana voajanahary amin'ny gastritis